Zụta Tadalafil ntụ ntụ (171596-29-5) -Manufacturer & factory
Rating: SKU: 171596-29-5. Category: Mmekọahụ Mmebi Hormones
Tadalafil uzuzu, ihe akwara nke tadalafil, bu udi ucha ocha, a na-ejikarị ya eme ọgwụ ọgwụ tadalafil. Ọgwụ Tadalafil, aslo a na-akpọ / Cialis, bụ otu n'ime ọgwụ ndị akpọrọ PDE-5 (Phosphodiesterase type 5) inhibitors. Mmekọahụ na-eme ka Tadalafil / Cialis na-eme ka akwara nke arịa ọbara na-eme ka ọbara na-asọba n'akụkụ ụfọdụ nke ahụ. Tadalafil / Cialis na ndị ọzọ na-emechi PDE-5 nwere ike inyere ụmụ nwoke aka na-arụ ọrụ erectile (ED) site na ịkwalite mmeghachi omume erectile mgbe nwoke na-akpali agụụ mmekọahụ. A na-eji ya agwọ ọrịa na-erectile (adịghị ike) na mgbaàmà nke hypertrophy prostatic na-arịa ọrịa (prostate gbasaa). Ndị mmadụ na-azụkarị tadalafil uzuzu si akwa dị ọcha tadalafil uzuzu soplaya. E wezụga Tadalafil / Cialis, ọgwụ ndị ọzọ dị na klaasị a bụ Viagra (Sildenafil) na Levitra (Vardenafil), na Flibanserin.
Ihe Dị Mkpa: Ejighị nitrates were were Cialis n'ihi ike ya iweda ọbara mgbali. Ekwesighi ka ewere nitrates ma obu ihe kariri 48 awa tupu Cialis jiri otutu ndi oru nitrate choro iji zere nke a na PED5 niile.
N'ụlọ ahịa ọgwụ mpaghara, ma ọ bụ n'ụlọ ọgwụ, anyị nwere ike ịhụ cialis n'ụzọ dị mfe, nke bụ tadalafil. Ee, nke a bụ tadalafil uzuzu - otu n'ime ngwa a na-emekarị ka ọ bụrụ ọgwụ maka ọgwụgwọ ED, ọ na-abụkarị mkpụrụ ọgwụ ma ọ bụ mbadamba, na mgbakwunye na nke a, n'eziokwu, a na-ejikwa tadalafil n'oge ndị ọzọ, dị ka :
Enwere ike ịgbakwunye Tadalafil na candies iji mee ka candies nkịtị mee ka agụụ mmekọahụ nwoke nwee. E nwere ọtụtụ ụdị swiiti mmekọahụ na Malaysia, ihe ndị bụ isi na-abụkarị tadalafil uzuzu, na sildenafil uzuzu.
Maka anyị, mgbe ụfọdụ iji nwee mmetụta siri ike ma ọ bụ mmetụta na-esighị ike, anyị nwere ike ịme kọfị mmekọahụ site n'ịgbakwunye mmekọahụ na-eme ka ntụ tadalafil dịkwuo mkpa, dị ka mkpa onye ahịa si eme ka kọfị nwee mmetụta dị iche iche.